बाटो बनाउँदा भेटिएको पुरानो मूर्ति ? दर्शन गरेर शेर गर्नुहोस आटेको पुग्ने छ – Ujyaalo Patrika
बाटो बनाउँदा भेटिएको पुरानो मूर्ति ? दर्शन गरेर शेर गर्नुहोस आटेको पुग्ने छ
‘मूर्तिबारे अध्ययन गर्न टोली बनाएर अनुसन्धान क्षेत्रमा पठाएका छौं। तर उहाँहरूबाट नै हामीले रिपोर्ट प्राप्त गरेका छैनौं,’ पुरातत्व विभागका महाप्रबन्धक दामोदर गौतमले को कुराकानीमा भने।
उनले मूर्तिबारे अध्ययन अनुसन्धान भइरहेको र रिपोर्ट नआएसम्म केको मूर्ति र कति वर्ष पुरानो हो भन्न नसकिने बताए।
‘यसबारे थाहा पाउन अझै केही समय लाग्न सक्छ,’ महाप्रबन्धक गौतमले थपे।
गौतमका अनुसार रिपोर्ट आउन ढिला हुनुमा दुई प्रमुख कारण छन्।
पहिलो, मूर्ति अनुसन्धानमा आवद्ध दुई जना कोरोना संक्रमित भए। यस कारण केही महिनासम्म अध्ययन बन्द गर्नु पर्‍यो।
‘अर्को, पुरानो चिजवस्तु अध्ययन गर्न समय लाग्छ नै,’ उनले प्रष्टाए।
महाप्रबन्धक गौतमका अनुसार मूर्ति कति पुरानो हो भन्ने थाहा पाउन माटो, ढुंगा, कोरिएको आकृति, गहनाको डिजाइन लगायतले भूमिका खेल्छ। यसका लागि इतिहासका विभिन्न कालखण्डमा प्रयोग हुने माटो, ढुंगा तथा कलाबारे अध्ययन गरी प्राप्त मूर्तिको परीक्षण गर्नुपर्छ। त्यसैले नतिजा आउन समय लाग्छ।
‘हामीले दिएको जानकारी आधिकारिक हुन्छ। त्यसैले हतार गरेर नतिजा सार्वजनिक गर्न मिल्दैन नि। हेर्दा ढिला गरिएजस्तो देखिए पनि व्यावहारिक र प्राविधिक पाटोका कारण काम गरेको नदेखिएको हो,’ उनले भने।
भेटिएको मूर्ति बेलायती पुरातत्वविदलाई पनि अध्ययनका लागि देखाउने पुरातत्व विभागको योजना छ।
‘हाम्रो लागि पनि यो मूर्ति विशेष छ। यसबारे थप अध्ययन गर्न बेलायती पुरातत्वविदलाई बोलाउँदै छौं। यसले हामी सबैलाई मूर्ति क्षेत्रमा अध्ययन गर्ने नयाँ आयाम बन्न सक्छ,’ उनले भने।
मूर्तिबारे आधिकारिक जानकारी आएपछि मात्रै कहाँ राख्ने र के गर्ने भन्ने निर्णय गरिनेछ।
काभ्रेको धुलिखेल नगरपालिका-३, बतासे डाँडामा बाटो निर्माण गर्दा उक्त मूर्ति फेला परेको हो। चंखुबेसी मार्ग निर्माणका लागि बाटो खन्ने, सम्याउने काम भइसकेपछि ढलान गर्न ढुंगा बिच्छ्याइँदै थियो। यस क्रममा ढुंगा बाटोछेउ राखिएको थियो।
मूर्तिको दायाँ हात काटिएको छ भने कम्मरमुनिको भाग छुट्टिएको छ। मूर्तिको पछाडि कलात्मक बुट्टा छ। स्वरूप हेर्दा वीरूपाक्षको मूर्ति हो कि भन्ने अनुमान छ, यकिन नभइसकेको धुलिखेल नगरपालिकाका मेयर अशोककुमार ब्याञ्जुले बताए।
‘मूर्ति बाटो बनाउन रोशी खोलाको ढुंगाखानीबाट ल्याइएको ढुंगासँगै आएको रहेछ,’ उनले भने, ‘मूर्तिको स्वरुपअनुसार विभिन्न कुरा आइरहेको छ। यो नै भन्ने पुष्टि भएको छैन।’
गाउँमा मूर्ति भेटिएपछि सुरूमा बाटोछेउ एउटा मन्दिर बनाउने भनियो। मूर्ति धेरै पुरानो हुनसक्ने भनेपछि संरक्षणका लागि उनीहरूले धुलिखेल नगरपालिकालाई हस्तान्तरण गरे।
धुलिखेल नगरपालिकाले उक्त मूर्ति पुरातत्व विभागलाई जिम्मा लगाएको हो।
‘हामीले पुरातत्व विभागलाई जिम्मा लगाइसकेका छौं। त्यसपछि मूर्तिबारे विभागबाट थप जानकारी पाएका छैनौँ,’ मेयर ब्याञ्जुले भने।
Next आफ्नै श्रीमती दुबईमा पा’किस्तानीसंग मो’जम’स्तीमा रमेको फोटो देखेपछि . . .